WOT ludumo lwakho? | Martech Zone
NgoMgqibelo, Julayi 9, 2011 NgoLwesihlanu, ngoJuni 19, 2015 Douglas Karr
Kuyamangalisa ukuba zazingasekho iindaba ze ukuzibandakanya kweWOT kunye neFacebook. I-WOT imele "iWebhu yeTrasti" kwaye yindawo eyakhiwe luluntu yabasebenzisi abalinganisa iiwebhusayithi.
Ngo-Meyi, i-Facebook yaqala ukusebenzisa inkonzo njengenja yamapolisa ukukhusela abasebenzisi bayo ngokuchofoza kwiziza ezinobungozi. Kuvakala njengokuhamba okuhle nge-Facebook ngaphezulu, kodwa iipinings ezisisiseko se-WOT ngokwenene ziyothusa. Kwezinye iisayithi, ii-WOT zinokuma njenge "Web Of Trolls". Ityala elinye elinqaku ziindawo zabanikezeli beenkonzo ze-imeyile.
Umbono nge-imeyile kwiWOT:
Ithagethi ngqo kwi-WOT:
MailChimp, Umbono nge-imeyile, Nxibelelana kwaye NgqoThagethi Ngababoneleli beenkonzo ze-imeyile aba-4 abahlukeneyo kodwa bonke bazibandakanye kakhulu kuthengiso olusekwe kwimvume, baqinisekisa ukuba abathengi babo bobabini bafundiswe kwimigaqo ye-SPAM, kwaye bonke banamaqela okuhambisa ahlala ekwakheni ubudlelwane nabaBoneleli ngeeNkonzo ze-Intanethi. Ukuba bayayivumela i-SPAM, amaxabiso okuhanjiswa kwabo angalahla kwaye bebeya kuphela ngaphandle kweshishini. I-ESP ihlala kwaye iphefumla ngokukwazi kwayo ukufumana umyalezo kwibhokisi engenayo.
Andiyithandabuzi into yokuba i-imeyile engacelwanga iyenze yaphuma kwezi ze-ESPs… kodwa andiqiniseki nokuba umxhasi onoxanduva lwe-SPAM wacetyiswa okanye wakhutshwa kwinkampani. Nganye kwezi ESPs inezikhokelo ezingqongqo ekufuneka inkampani ivumelane nazo. Endaweni yokubamba abaxumi baphendule, nangona kunjalo, ukungagqibeki kwe-WOT kumthombo wemiyalezo ngeedilesi ze-IP kwaye kusebenza ukugxeka kwi-ESP, ngaphandle kokuma kwabo kuluntu lwe-imeyile. Ukusukela oko i-WOT iqale njengendawo yase-Yuropu, iisayithi zase-Europe zikwangqinwa ngokugxeka ngakumbi kuneendawo eziseMntla Melika.
Iziphumo zala manqanaba amabi kukuba ezi ndawo ngamanye amaxesha zivaliwe ziisayithi, ezinjengeFacebook, xa abasebenzisi becofa ikhonkco langaphandle. Khawufane ucinge ukuphulukana nayo yonke itrafikhi yakho ye-Facebook ngenxa yenqanaba elingalunganga le-WOT! Yinto ebalulekileyo kule mihla.
Ngelishwa, ezinye piisayithi ze-orn zinamanqaku angcono okuthembeka kunababoneleli ngeenkonzo ze-imeyile!
Ingxaki kukuba abantu abaninzi baziva ukuba kukho ubulumko kwisihlwele xa kukho abukho ubungqina obunjalo. Uninzi lwezihlwele lwenziwe ngabantu abangaziwayo abangabalandeli abalandelwa ngabalandeli abangaziwayo ... kwaye abanye babaphembeleli abayiyo ingcali yemicimbi ngesihloko abakulinganisayo.
Kule meko ithile, siyabona ukuba uluntu lwe-WOT… uninzi lwazo ekusenokwenzeka ukuba aluzange lusebenzise uMboneleli weNkonzo ye-imeyile… bacinga ukuba nabani na okhupha izixa ezikhulu ze-imeyile ngumthumeli nje. Amanqaku awaziwa, abhalwe gwenxa, kwaye awuniki bungqina bokuba umthombo yomcimbi odumileyo nguMboneleli weNkonzo ye-imeyile ekuthethwa ngaye. Akukho ndlela yokubuza uphononongo ngokuchaneka okanye ulwazi ... kwaye akukho ndlela yokufumana iinkampani eziba lixhoba kwisihlwele.
Ukuba siza kushiya igama lesiza sethu siye kubulumko besihlwele, ngubani oqinisekisa ukuba isihlwele sifundile kwaye siyayazi into eyenzayo? Iya kuba nengqondo ngakumbi kubathengi abaqinisekisiweyo bezi ndawo kunye neenkonzo ukuba babe nakho ukubeka umthengisi kumgangatho kunabantu ongabaziyo abalandela ngokulula bulumko yesihlwele. Andiqinisekanga ukuba i-WOT sisisombululo esihle se-Facebook okanye nasiphi na isicelo esiza kusetyenziswa.
Ndijonge phambili ekuboneni ukuba isithuba sam sichaphazela njani ukuthembeka kwesizinda! Ndiyathemba ukuba ayizukuba ntle.
tags: Facebookidumelathembaiwebhu yokuthembelayazi
Iprofayile ye-LinkedIn kunye nokuSebenzisa
Jul 12, 2011 ngo-9: 01 PM
Udumo lwesiza lubalwa kumanqaku, hayi kwizimvo. Ukushiya uluvo kukhethwa ngokuzithandela, kwaye kuba abasebenzisi abangavumelani nedumela kunokwenzeka ukuba babhale nezimvo, akuqhelekanga ukuba amagqabantshintshi abonakale ngathi aphikisana nedumela.
Ukulinganiswa kwegama labathathu kwabanikezeli beenkonzo ze-imeyile ekubhekiswe kubo ekuthumeleni kwakho kulungile okanye kulungile. Nceda ubone amakhadi amanqaku:
Inye kuphela enegama elibi yile:
Njengoko igama lethu libonisa, i-WOT imalunga nokuthembana. Ukhuseleko lobuchwephesha bewebhusayithi yinto ebalulekileyo xa kumiselwa ukuthembeka kwayo. Nangona kunjalo, sisizathu esivakalayo sokulinganisa indawo ngokungalunganga ukuba awuthembi umxholo okanye umbutho emva kwewebhusayithi, okanye kwezi meko, ukuba ufumana ugaxekile.
Ukulinganiswa kwegama le-WOT zizimvo zabasebenzisi ezizimeleyo kunye namava malunga nokuthembeka kwewebhusayithi. Siyakholelwa ukuba ukudibanisa isixa esikhulu sezimvo / amava (aka Wisdom of the Crowds) ngolwazi esilufumana kwimithombo yethu ethembekileyo (ubuqhetseba kunye noluhlu olungalunganga lwe-malware, njl.) Isinika olona lwazi luchanekileyo malunga nokuthembeka kwewebhusayithi.
Ukuba awuvumelani nenqanaba, elona khondo lililo lokusebenza lelokuzilinganisela ngokwakho kwaye ungeze amagqabantshintshi achaza amava akho kunye nesiza.
Jul 14, 2011 ngo-10: 53 PM
Ndicinga ukuba kukhuselekile ukucinga ukuba ukuba abantu bathatha ixesha lokubeka izimvo, bakwabhala indawo. Andiphikisani nawe ngokubhekisele kwithemba lomxholo okanye umbutho. Andivumelani nawe malunga nokuchaneka kwendawo yakho. Ukhankanya i-SPAM, kodwa i-imeyile enganikelwanga kakuhle yinkokeli kwilizwe liphela ekuhambiseni nasekungeneni, kwimyalezo yokuthengisa esekwe kwimvume. Indawo yakho ayilunganga kwaphela.
IWebtrends yayiyinkampani yokuqala yokuhlalutya kwi-Intanethi. Iitroli zokufumana amanqaku kwindawo yakho ziyacaphuka ngenxa yetekhnoloji yokulandela umkhondo. Isimanga kukuba indawo yakho isebenzisa uGoogle Analytics -ukulandela umkhondo kweendwendwe.
Ukugxotha le ngxelo kunye nokucebisa nje abantu ukuba 'bafumane amanqaku angaphezulu' ayisiyiyo ingxaki enkulu apha. Inkampani yakho inesakhono sokuchaphazela kakubi ukugcwala kwabantu abaya kula mashishini-ukanti awuboneleli ngeendlela ezifanelekileyo, ezomthetho, amashishini athembekileyo okuphanda okanye acoce amanqaku abo.
Jul 14, 2011 ngo-11: 41 PM
Ndiyayithanda iWebhu yeTrust, Kodwa ndiqaphele izinto ezifanayo. Olunye uphononongo, enyanisweni uphononongo oluninzi, njengokudubula umthunywa wenkonzo ethile ngenxa yabasebenzisi abangathobeliyo kunye nokungahoyi imigaqo kunye nemigaqo yenkonzo. Ndisasebenzisa i-WOT, ndiyisebenzisa nje ngqolowa yetyuwa.
Sep 19, 2011 kwi-10: 03 AM
Wamkelekile kwixesha elitsha lokuzingelwa kobugqi kwidijithali.
Ukuba isihlwele besinolwazi, ngekhe sidinge ukuba oorhulumente basithathele isigqibo sonke.
Ngokwenyani, andothusi nyani ukuba bekungekho bhengezo ngakumbi malunga nesivumelwano phakathi kweWebhu yeTrust kunye neFacebook kuba ibizakuveza inkqubo yeWebhu yeTrust kuhlalutyo lwabantu abanolwazi. Kwaye ngekhe kuthathe ixesha elininzi ukubhengeza iimpazamo ezininzi kwinkqubo yabo kunye nokungabikho kokuthembeka kokulinganiswa kwabo.
Ukuba unomdla wokufunda ngakumbi ngeWebhu yeTrust, ndiyakumema ukuba ufunde uhlalutyo olunzulu endilubhalileyo: Uvandlakanyo lweWebhu ye-MYWOT: IWebhu yangoku yeTitaritarism
Kungalixesha lokuveza inyani enukayo emva kweMyWot…
Jan 25, 2012 kwi-8: 21 AM
UDoug, ndenze uvavanyo ngebhlog yam. Indawo yam ibinemilinganiselo elungileyo ngaphambi kokuba ndiyingenise kuvavanyo. Ke ngequbuliso ii-troll zaya emsebenzini zaza zalinganiswa ngokungalunganga. Ndibhale iposi ngayo ukuze ufumane umdla:
Andiqinisekanga ukuba kutheni uFacebook enze isivumelwano nabo. Ukulinganiswa kwabo kunokusetyenziswa gwenxa kwaye ndikubonakalisile oku kwam. Batshabalalisa udumo lweeblogger ezisemthethweni kunye namashishini akwi-Intanethi, kwaye babaleke nayo. Bakhuthaza iireyithingi ezingalunganga kuba iyabanceda bakhule isiseko somsebenzisi. I-WOT isebenzisa impikiswano ukufumana abasebenzisi abaninzi ngangokunokwenzeka.
UDeborah uyaphuma kwaye uxelela wonke umntu ukuba ayilinganise ngokwakho indawo, okanye ufumane abanye ukuba bayilinganise. Oko kulapho kuveza iinjongo zabo zokwenyani.
Meyi 18, 2012 kwi-10: 45 AM
Abantu abaninzi abonwabileyo phaya ngaphandle
Andazi ukuba ndenzeni ngawo onke amanqaku amabi abanika wona.
Nazi ezinye ezizama ukwenza ezinye ngayo -
Juni 28, 2013 ngo-8: 49 AM
I-MyWOT iphambanisa kakhulu namashishini naphi na
igama. I-90% yamanqanaba abonakala enziwe liqela labasebenzisi.
Amagqabantshintshi abo ajongeka ngathi yitemplate kwaye uninzi lwabo alubi. Bayabanga oko
amaxabiso enziwa ngokusekwe kwinani elikhulu leevoti kodwa bubuxoki obunyulu.
Inqanaba labasebenzisi abanamandla lokulinganisa liphezulu kunendlela eqhelekileyo yomsebenzisi. Ke masenze njalo
Yenza abanye abasebenzisi apho kwaye bahlawule kude kube sinikwe amandla umsebenzisi kunye neVoilaaa, thina
Unako ukujija udumo lomntu. Ewe, ukuba bayasihlawula, siyayisusa
ukalisho olubi. Ishishini elilungileyo akunjalo?
Ndicinga ukuba iigeek zingenza imali eninzi kwi-MyWOT (Webhu ye-SCAM).
Jul 1, 2013 ngo-5: 31 PM
Ndiyavuma @spot_mark: disqus, akukho rhyme okanye isizathu kwinkqubo yabo yokulinganisa.